Ntugharị na njem nleta na Brazil | Otu Di na Nwunye
Brazil na-akọwa ụfọdụ n'ime ala mara mma na South America. Obodo buru ibu, oge a ga-enye gị ohere ịhụ ihe niile si n'ụsọ osimiri jupụtara na ndị na-aga oriri na ọṅụṅụ, nnukwu mmiri mmiri dị na Iguazu Falls, na oké ọhịa Amazon.
Na-achọ ebe dị mma maka oriri? Lelee Copacabana Beach mgbe a na-edebe ya!
sugar ogbe achịcha
Ala Mmiri Amazon
Ego: Brazil Brazil (BRL). BRL bụ 3.3 maka 1 USD ugbu a.
Ike Ike: Na Brazil, ndị nwere ike dị ka ụdị N. Na volta ọkọlọtọ bụ 127 / 220 V na akara ngosi bụ 60 Hz.
Nọmba Mberede: Ihe ka ọtụtụ ná ndị amaala maara nọmba 190 (Ndị uweojii na-ahụ maka ndị agha) maka mberede, ma 192 (ụgbọ ala mberede), 193 (firefighters) na 199 (mkpuchi obodo) na-amarakarị.